Ny fahafaha-mitanjozotra mitanjozotra mitanjozotra tokana mahazaka enta-mavesatra dia miankina amin'ny zoro fifandraisana, izany hoe ny zoro ivelany raceway. Arakaraky ny haben'ny zoro, ny haben'ny fahafaha-mitondra ny axial. Ny tadin-tsarimihetsika ampiasaina amin'ny tapered indrindra dia ny bearings roller tapered. Ao amin'ny foiben'ny kodiarana eo alohan'ny fiara dia ampiasaina ny fitaterana rojom-baravarankely misy tsipika kely. Ny tadin-dambam-baravarankely misy rihana efatra dia ampiasaina amin'ny milina mavesatra toa ny milina fitaratra mangatsiaka sy mafana.
Ny peratra anatiny sy ivelany dia misy hazakazaka mitete, ary misy rojom-panala eo anelanelan'ny lalana. Raha mihitatra ny velaran-tariby, dia hiangona izy io amin'ny fotoana iray amin'ny axis mitondra. Ny bearings roller tapered dia ampiasaina matetika hitondra enta-mavesatra radial sy axial, indrindra ny enta-mavesatra. Ny fahafaha-mitondra axial mitondra ny fahaizany mitondra dia tapa-kevitra ny zoro fifandraisana, ny lehibe ny zoro antena, ny lehibe kokoa ny axial enta-mavesatra mitondra. Tapered roller bearings dia bearable azo zahana. Ny peratra anatiny misy rozika sy tranom-borona dia singa anatiny, izay azo apetraka misaraka amin'ny peratra ivelany. Ity karazan-jaza ity dia afaka mametra ny famindrana axial amin'ny lafiny iray amin'ny zana-kazo na ny trano, ary tsy mamela ny zana-kazo hikorontana mifandraika amin'ny lavaka fonenana. Eo ambanin'ny hetsika enta-mavesatra radial dia hiteraka hery axial fanampiny. Noho izany, amin'ny ankapobeny ny bearings roa an'ny bearings, ny peratra ivelany sy ny peratra anatiny misy ny bear dia apetraka mifanaraka amin'ny tarehy farany.
Mitondra tena eo amin'ny fitondrana baolina, Heavy Rolling Bearings, Inch Single Row, Roller Pin Bearings, Mitondra Ball feno famenony, Taper Roller Bearing Arrangement,